Football Khabar » पुलिस क्लबलाई हराउँदै मनाङले उचाल्यो आहा ! रारा गोल्डकपको उपाधि
पुलिस क्लबलाई हराउँदै मनाङले उचाल्यो आहा ! रारा गोल्डकपको उपाधि
मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबले १८औं संस्करणको आरा ! रारा गोल्डकप फुटबलको उपाधि जितेको छ । शनिबार भएको फाइनल भिडन्तमा मनाङले नेपाल पुलिस क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४–३ ले हराउँदै छैटौंपटक उपाधि पोल्टामा पारेको हो ।
पोखराको रंगशालामा भएको भिडन्को निर्धारित ९० मिनेटको खेल ०–० मा सकिएको थियो । त्यसपछि थपिएको अतिरिक्त ३० मिनेटको खेल पनि ०–० मै सकिएपछि खेल पेनाल्टीमा धकेलिएको थियो । जहाँ मनाङले पुलिसलाई स्तब्ध बनायो ।
पेनाल्टी सुटआउटमा पुलिसका भेला सिलवाल, हेम तामाङ र बुद्ध बलले गोल गरे भने मनाङका अन्जन विष्ट, पुजन उपरकोटी, सुरज बिक र रन्जन विष्टले गोल गरे । पुलिसका गोलरक्षकले मनाङको दोस्रो पेनाल्टी रोकेका थिए । तर, मनाङका गोलरक्षक अजित बरालले पुलिसको एक पेनाल्टी बचाइदिए ।
पाँचौं नम्बरमा आएका पुलिसका अजितको प्रहार पनि अजितले रोकेपछि मनाङ जितनजिक उभियो, जहाँ रन्जनले कुनै गल्ती गरेनन् । अब यो उपाधिसँगै मनाङले उपाधिसँगै नगद १० लाख रुपैयाँ पुरस्कारमा पायो भने उपविजेता पुलिस क्लबले ५ लाख पायो ।
प्रकाशित मिति १ चैत्र २०७६, शनिबार २०:४४